Araka ny vaovao azo, misy fiara iray mpitondra solika (citerne) mitondra rongony avy any Ihosy hiakatra any Antananarivo. Teo no ho eo ihany dia raikitra ny fametrahana sakan-dalana. Araka ny vaovaon’ny zandarimariam-pirenena, tokony ho tamin’ny 5ora maraina dia tonga tao Ankaramena, Ambalavao, tao amin’ny Faritra Matsiatra ambony tokoa ilay fiara. Natao ny fisavana ka hita tao marina ireo rongony milanja 700kg. Nentina tany amin’ny biraon'ny zandarimaria Ankaramena ny fiara ary navoaka tsirairay avy tao ireo gony misy azy ka nahatratra 30 isa. Olona telo no tao anatin'io fiara io dia ny mpamily sy ny mpamily mpanampy ary vehivavy. Efa tsy misy valaka amin’ireo firenena andihizan’ny tambajotran’ny zava-mahadomelina ny eto Madagasikara amin’ny tsy fisavan’ny mpitandro filaminana ny anatin’ireny fiara toy itony. Noho izany, mitaky fisavana avokoa ireo fiara rehetra izay tsy nampiahiahy hatrizay, tsy ampy fotsiny ny manamarina taratasin’ny fiarakodia raha tena te hisoroka ny tsy fandriampahalemana. Mazava izao ny fomba mampitosaka ny zava-mahadomelina eto an-drenivohitra.